Inona avy ireo zoko fanafoanana fitsangantsanganana an-tsambo? | Fitsangatsanganana tanteraka
Inona avy ireo zoko fanafoanana fitsangantsanganana an-tsambo?
Ana Lopez | | soso-kevitra, About us
Azo antoka fa mieritreritra ianao fa raha mamandrika ny fitsangantsanganana an-dranomasina ianao dia nofoanana amin'ny farany, dia manan-jo hamerina ny vola naloanao ianao, ary raha efa nandoa izany ianao dia feno ity famerenam-bola ity ... eny, tsy toy izany foana. Ny mazava dia izao: alohan'ny fanafoanana dia manan-jo hitaky ianao, amin'ny maha mpanjifa anao no zonao indrindra, avy eo misy antsipiriany marobe ao amin'ny pirinty kely.
Holazaiko aminao ny momba ny sasany amin'ireo zon'ny mpandeha fitsangantsanganana an-dranomasina ho avyIreo dia amin'ny antsipiriany amin'ny lalàna mifehy ny zon'ny mpandeha mandeha amin'ny lalan-dranomasina sy anaty rano.
Toy ny fitsipika Ny fitsangantsanganana an-tsambo dia heverina ho nifanarahana tamin'ny fomban'ny roa farafahakeliny amin'ireo takiana, fitaterana, fampiantranoana na serivisy fizahan-tany. Zava-dehibe io antsipiriany io, satria hisy fiantraikany amin'ny onitra izany.
Ny zonao voalohany dia ny mahazo vaovao mandritra ny dia. Raha misy fanafoanana na fanemorana dia tsy maintsy taterina farafahakeliny 30 minitra alohan'ny ora fiainganana voatondro na raha vao fantatra ny toe-javatra. Raha mihoatra ny 90 minitra na fanafoanana io fahatarana io dia tsy maintsy manome fikarakarana fototra ho an'ireo mpandeha ny orinasa manondro ny fitsangantsanganana an-tsambo, ary ao anatin'izany ny trano honenana.
Ny olona manana fahasembanana na mihena ny fivezivezena dia manan-jo homena toky fitsaboana tsy manavakavaka sy fanampiana manokana maimaimpoana ilain'izy ireo, na amin'ny sambo na amin'ny seranana.
Fa izay nolazaiko anao tany am-piandohana, ny zonao lehibe indrindra dia ny mimenomenona, voatery ny orinasan-tsambo sy ny mpandraharaha mpitsangantsangana hanana ny rafitra fikirakirany fitarainana. Noho izany dia mila mitaraina amin'izy ireo ianao ary, raha iray volana ianao tsy nahazo valiny, miaraka amin'ny fanapahan-kevitra ekena, nolavina na eo am-panadihadiana, dia tokony ho fantatrao fa manana iray volana iray hafa izy ireo hamahana amin'ny fomba mazava ny fitakiana. Raha tsy nomena io valiny io dia mila mandeha mivantana mankany amin'ny lalànan'ny mpanjifa ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » General » soso-kevitra » Inona avy ireo zoko fanafoanana fitsangantsanganana an-tsambo?
Sarany tena manintona raha mamandrika alohan'ny 30 Jona ao Costa Cruises ianao
Katalaogy vaovao an'ny MSC Cruises vaovao 2018-2019 miainga avy any Barcelona
Raiso ny fifanarahana fitsangantsanganana farany.